Chii chinoitwa negweta? - Law & More B.V.
Blog » Chii chinoitwa negweta?
Chii chinoitwa negweta?
Kukuvadza kwakatambudzwa pamaoko emumwe munhu, akasungwa nemapurisa kana kuda kumira kodzero dzako wega: dzakasiyana nyaya umo rubatsiro rwegweta hachisi chinhu choumbozha chisina basa uye mumatare ehurumende kunyange chisungo. Asi chii chaizvo chinoita gweta uye nei zvakakosha kuhaya gweta?
Iyo yeDutch mutemo system yakanyatso nzwisisika uye yakasimbiswa. Kuti tidzivise kusanzwisisana uye kuburitsa chinangwa chemutemo nenzira kwayo, sarudzo dzese dzemazwi dzakatariswa uye masisitimu akaomarara akaiswa kuti ave nechokwadi chekuchengetedzwa kwemutemo. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti zvinowanzo kuve zvakaoma kufambisa nzira kuburikidza neizvi. Gweta rakadzidziswa kuturikira mutemo uye rinoziva nzira yaro kuburikidza nesango remutemo 'senge hapana mumwe. Kusiyana nemutongi kana muchuchisi weruzhinji, gweta rinongomiririra zvido zvevatengi vake. At Law & More mutengi uye chinobudirira uye chakaringana mhedzisiro kumutengi chinouya kutanga. Asi chii chaizvo chinoita gweta? Mukutaura, izvi zvinoenderana zvakanyanya nenyaya yaunobatira gweta.
Kune mhando mbiri dzekutongwa idzo gweta dzinogona kutanga kwauri: maitiro echikumbiro uye nzira yemasamanisi. Panyaya yemutemo wekutonga, tinoshanda nenzira yekukwiridzira, inozotsanangurwazve mune ino blog. Mukati memutemo wematsotsi, iwe unogona chete kugamuchira masamanisi. Mushure mezvose, vePublic Prosecution Service chete ndivo vane mvumo yekutonga mhosva dzematsotsi. Kunyangwe ipapo, gweta rinogona kukubatsira mukumisikidza kupokana, pakati pezvimwe zvinhu.
Pakutanga nzira yekukumbira, sekureva kwezita, chikumbiro chinoitwa kumutongi. Iwe unogona kufunga nezvezvinhu zvakaita sekurambana, kuputswa kwechibvumirano chebasa uye kuiswa pasi pekutarisirwa. Zvichienderana nezvenyaya iyi, panogona kunge paine kana pasingawirirane. Gweta rinogadzirira chikumbiro kwauri icho chinosangana nezvose zvinodiwa zvepamutemo uye ichaumba chikumbiro chako nenzira kwayo sezvinobvira. Kana paine munhu anofarira kana anopomerwa, gweta rako richapindurawo chero chirevo chekudzivirira.
Kana maitiro echikumbiro atangwa nerimwe bato rauri bato rinopikisa kana bato rinofarira, unogona zvakare kutaura negweta. Gweta rinogona kukubatsira kunyora chirevo chekuzvidzivirira uye, kana zvichidikanwa, gadzirira kunzwikwa nemuromo. Munguva yekutongwa, unogona zvakare kumiririrwa negweta, iro rinogona kukwidza nyaya kana iwe usingawirirane nedare remutongi.
Maitiro ekudana masamanisi
Mune dzimwe dzese nyaya, nzira yemasamanisi inotangwa, mune izvo kesi maonero emutongi mune kumwe kunetsana anokumbirwa. Sabhuku rinoshevedzwa samanisi kuti vauye kudare; kutanga kwemaitiro. Ehe, gweta rako riripo kutaura newe panguva yekutongwa, asi zvakare kuti ikubatsire iwe usati uye mushure mekunzwa. Kubata negweta kunowanzotanga mushure mekugamuchira masamanisi kana paunenge uchida kuzvitumira wega. Paunotanga maitiro iwe pachako uye nekudaro uri muridzi, gweta haringopaire chete kana kutanga maitiro kune zvibereko, asi zvakare anonyora masamanisi anofanirwa kusangana nenzira dzakasiyana siyana. Asati anyora masamanisi, gweta rinokwanisa, kana richida, kutanga ritaurirana neanopikisa nekunyora kuti riwane gadziriso, pasina kutanga matanho epamutemo. Kana zvakadaro zvikasvika pamasamanisi maitiro, kumwe kuonana nebato rinopikisa kuchazotarisirwawo negweta kuti vaone kuti maitiro acho anofamba zvakanaka. Nyaya iyi isati yanzwikwa nemuromo nemutongi, panenge paine runyorwa rwakanyorwa umo mapato maviri aya anogona kupindirana. Iwo magwaro anotumirwa kumashure uye mberi anowanzo kuverengerwa nemutongi panguva yekunzwa kwemuromo kwenyaya. Muzviitiko zvakawanda, zvakadaro, mushure mekunyora kutenderera uye kuyananisa, haichazouya kumusangano, nenzira yekuronga pakati pemapato maviri. Nyaya yako yakazopera mukutongwa uye hausi kubvumirana nemutongo here mushure mekunzwa? Pakadai, zvakare, gweta rako rinokubatsira kukwidza nyaya kana zvichidikanwa.
Administrative mutemo kukwidza maitiro
Kana iwe usingabvumirane nesarudzo yesangano rekutungamira (sangano rehurumende) senge CBR kana manisiparati, unogona kuramba. Iwe unogona kuve netsamba yekushora yakakwenenzverwa negweta iro rinoziva nezve chiyero chebudiriro chekuisa chinoramba uye anoziva kuti ndedzipi nharo dzinofanirwa kuiswa pamberi. Kana iwe ukanyoresa kupokana, mutumbi unoita sarudzo pane chishoro (bob). Kana iwe usingabvumirane nesarudzo iyi, unogona kufaira chiziviso chekukwirira. Kune mutumbi upi, senge dare, CBb, CRvB kana RvS, kukwidza kunofanirwa kuendeswa kunoenderana nenyaya yako. Gweta rinogona kukubatsira iwe kuendesa chiziviso chekukwirira kumasimba akakodzera uye, kana zvichidikanwa, kuumba mhinduro kune chirevo chebato rinotonga rekudzivirira. Pakupedzisira, mutongi achatonga pamusoro penyaya iyi mushure mekunzwa kwekunzwa. Kana iwe usingabvumirane nesarudzo yemutongi, unogona kukwidza nyaya pasi pemamwe mamiriro ezvinhu.
(Subpoena) mutemo wematsotsi
MuNetherlands, Public Prosecution Service inopomerwa mhosva yekuferefeta nekutonga mhosva dzematsotsi. Kana iwe wakagamuchira masamanisi kubva kuPublic Prosecution Service, unofungidzirwa kuti wakapara mhosva mushure mekuferefetwa kwekutanga. Kuhaya gweta danho rehungwaru. Mhosva yemhosva inogona kuzadzwa zviri pamutemo uye kuongorora magwaro kunoda ruzivo. Gweta rinogona kuramba kusamanisi kuitira kuti nzeve yekunzwa inogona kudzivirirwa. Muzviitiko zvakawanda, kunzwikwa kwemuromo kwenyaya yematsotsi kunoitika paruzhinji. Gweta richakwanisa kumiririra iwe zvakanaka panguva yekunzwa kwemuromo. Zvakanakira kuita gweta, semuenzaniso mushure mekuwanikwa kwezvikanganiso zvakaitwa panguva yekuferefeta, zvinogona kuwedzera kusvika pakuregererwa. Kana iwe pakupedzisira usingabvumirane nesarudzo yemutongi, unogona kukwidza nyaya.
Gweta rinogona kukuitira chimwe chinhu usati wagamuchira masamanisi. Gweta rinogona, pakati pezvimwe zvinhu, kupa rutsigiro nerubatsiro panguva yekubvunzurudzwa nemapurisa kana kuraira pamusoro pekupara mhosva kwaunofungidzirwa.
Kunyangwe iwe uchigona kuhaya gweta kuti ritange imwe yemaitiro ari pamusoro, magweta anogona zvakare kukubatsira iwe kunze kwedare redzimhosva. Semuenzaniso, gweta rinogona zvakare kukunyorera tsamba iwe mubhizinesi mamiriro. Kwete chete kuti tsamba inozonyorwa zvinoenderana nezvido zvako izvo zvinoisa munwe panzvimbo yakaoma, asi iwe zvakare unowana ruzivo rwepamutemo nezve yako nyaya. Nerubatsiro rwegweta iwe unozobatsirwa nezvinoitwa nezvisingaitwe nyaya yako uye kubudirira chinopfuura chokwadi kupfuura tariro chete.
Muchidimbu, gweta rinopa zano, rinomiririra uye rinomiririra nyaya dzako dzemutemo uye rinogara richiita mukufarira mutengi wake. Nezve tarisiro dzakanakisa, uchanyatsobatsirwa nekuhaya gweta.
Iwe unofunga iwe unoda here zano rehunyanzvi kana rubatsiro rwemutemo kubva kune nyanzvi gweta mushure mekuverenga chinyorwa chiri pamusoro? Ndapota taura Law & More. Law & MoreMagweta ane hunyanzvi munzvimbo dzakasiyana dzemutemo uye vanofara kukubatsira nerunhare kana e-mail.
Previous Post Shanduko muripo wechibvumirano chebasa: chinoshanda sei?
Next Post Gweta rinodiwa riini?
UNODA ZVAKAWANDA ZVAKAWANDA ??
Magweta edu ari pabasa rako.
Fona: +31 40 369 06 80
kana kusiya zvinhu zviri pasi apa